M/weyne Faroole iyo waftigii uu hogaaminayey oo dib ugu laabtay Garowe, kadib safar hawleed gaaban oo ay ku tageen degmada Xarfo, Mudug. – Radio Daljir
M/weyne Faroole iyo waftigii uu hogaaminayey oo dib ugu laabtay Garowe, kadib safar hawleed gaaban oo ay ku tageen degmada Xarfo, Mudug.
Luulyo 24, 2010 12:00 b 0
Xarfo, July 23 ? M/weynaha dawladda Puntland Dr C/raxmaan Sh Maxamed ?Faroole? iyo waftigii uu hoggaaminayey oo booqasho gaaban maanta ku yimid degmada Xarfo ee gobolka Mudug, ayaa dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kaddib markii ay dhammaysteen booqashadoodii.
M/weynaha iyo waftigiisa ayaa intii ay ku sugnaayeen degmada Xarfo kulamo albaabbada u xiran yihiin la yeeshay mas?uuliyiinta kala duwan ee maamulka gobolka Mudug, Issimada gobolka iyo waxgarad kaleeto oo ay si qoto fog uga wadahadleen xaaladda guud ee gobolka Mudug, gaar ahaanna midda nabadgalyada.
Mas?uuliyiinta gobolka Mudug ee madaxweynuhu uu la kulmay waxay isla qaateen qodobo badan oo ay ugu horrayso adkaynta ammaanka, iyadoo m/weynuhu uu soo jeediyey in la xoojiyo baraha koontarool ee gobolka, baaritaanno dheeraad ahna lagu sameeyo gaadiidka gobolka soo galaya iyo kuwa ka baxayaba si looga feejignaado isku-day kasta oo meel ka dhac ku ah amniga iyo nabadgalyada.
M/weynuhu waxaa uu si gaar ah kulan saacado qaatay ula yeeshay Islaam Bashiir Islaam Cabdulle oo ka mid ah salaadiin sida weyn looga qadariyo Puntland, isagoo m/weynuhu Islaanka ku booqday guriga uu ku leeyahay degmada Xarfo, halkaasi oo ay waxyaabo badan uga wadahadleen.
Inkasta oo dhammaanba kulamadu ay ahaayeen kuwo qarsoodi ah oo laga daboolay saxaafadda, haddana warar aan ka helay qaar ka mid ah madaxda dawladda oo aan si rasmi ah loo shaacin, waxay tilmaamayaan Islaamka iyo m/weynuhu in ay isla soo qaadeen arrimo badan oo ay ugu horrayso lacago dhawaan laga soo dejiyey garoonka magaalada Galkacyo oo ay dawladdu ka cabsi qabto in lagu farrakho suuqyada Puntland.
Sikastaba ha?ahaatee safarka m/weyne Faroole iyo waftigiisu ay ku yimaadeen degmada Xarfo, oo ahaa mid aan horay loo sii shaacin, ayaa si rasmi ah u soo gabagaboobay, kaddib markii muddo ku dhaw 10 saacadood ay halkaasi ku sugnaayeen, waxaana ay haatan gaareen magaalada Garoowe oo ay markii hore ka yimaadeen.
“In marna la yiraahdo amniga waa in wax laga qabtaa, marna la yiraahdo tallaabo lama qaadi karo, socon mayso” nabadoon Khaliif Aw-Cali.